Ịda ogbenye nke oge a - Okwu Ugbu a
Ịda ogbenye nke oge a
Ihe na January 13, 2022 January 16, 2022 by Mark
Ọ bụrụ na ị bụ onye debanyere aha Okwu Ugbu a, jide n'aka na ozi-e gị bụ ndị na-eweta ịntanetị "ederede ọcha" site n'ikwe ka email sitere na "markmallett.com". Ọzọkwa, lelee folda junk gị ma ọ bụ spam ma ọ bụrụ na ozi-e na-agwụ n'ebe ahụ ma jide n'aka na ị ga-aka ha dị ka "ọ bụghị" junk ma ọ bụ spam.
EBE AHỤ bụ ihe na-eme nke anyị kwesịrị ịṅa ntị na ya, ihe Onyenwe anyị na-eme, ma ọ bụ mmadụ nwere ike ikwu, kwere. Ma nke ahụ bụ iyipụ nke Nwunye Ya, Ụka Nne, uwe nke ụwa na ntụpọ, ruo mgbe o guzo ọtọ n’ihu Ya.
Hosea onye amụma dere…
Boa nne gi ebubo, bo! n'ihi na ọ bughi nwunyem, ma mu onwem abughi di-ya. Ya wezuga ikwa-iko-ya n'iru-ya, wezuga ikwa-iko-ya n'etiti ara-ya abua, ka M'we b͕apu ya ọtọ, rapu ya dika n'ubọchi amuru-ya. . . na mmiri m, ajị anụ na flax m, na mmanụ m na ihe ọṅụṅụ m.” + N’ihi ya, m ga-eji ogwu gbachie n’ụzọ ya, guzokwa mgbidi megide ya, o we ghara ichọta okporo-uzọ-ya nile… ub͕u a ka m'gēkpughepu ihere-ya n'iru ndi nāhu ya n'anya, ọ dighi kwa onye ọ bula puru inaputa ya n'akam. M'gēme kwa ka ọ ba n'ọzara, gwa kwa ya okwu di ilu; M'gēnye kwa ya ubi-vine nke o nwere, na ndagwurugwu Ekoa ka ọ buru ọnu-uzọ olileanya. ( Hos 2: 4-17 )
Onye-nwe, n’ịhụnanya Ya na-enweghị atụ n’ebe ọ nọ, na-adọta Nwunye Ya n’ime ọzara ka a jụpụ ya n’ịhụnanya nile na-esiteghị n’ime Ya. N'ihi ya, oge ndị a bụ oge kasị njọ na nke kasị mma nke a mụrụ anyị. O nwere okwu na-aga "Ndị na-ahọrọ ịlụ mmụọ nke ụwa n'oge a, a ga-agba alụkwaghịm n'ọdịnihu." N’ihi ya, Onye-nwe na-ayọcha mmadụ dị ka ọka n’ata iji dọta ndị mmadụ n’ebe onwe ya nọ, ka ha dị ọcha, dị nsọ na enweghị ntụpọ. Dị ka Hosia si dee, “A ga-akpọkwa ha, ‘Ụmụ nke Chineke dị ndụ.’” Cheta Amụma ahụ dị na Rome ebe Jisus kwuru,
M'gādubà gi n'ọzara: M'gānapu kwa gi ihe niile ị dabere ugbu a, yabụ ị dabere naanị na m… Ma ọ bụrụ na ịnweghị ihe ọ bụla ma e wezụga m, ị ga-enweta ihe niile… -enyere na Rome, St. Peter’s Square, Pentikọst Mọnde nke Mee, 1975 (site na Ralph Martin)
Ka m na-ede nke a, ọkpụkpọ òkù rutere na email m ka m bịa Ohio ikwu okwu na ọgbakọ. Mana azaghachiri m na gọọmentị anyị machibidoro ndị dị ka m, bụ ndị jụrụ ọgwụgwọ nnwale nnwale (n'agbanyeghị na enweela m COVID, enwekwara m nsogbu) ịga ụgbọ ala, ụgbọ oloko, ma ọ bụ ụgbọ elu. N'ezie, a naghị anabata m na mgbatị ahụ, ụlọ nri, ụlọ ahịa mmanya, ụlọ ihe nkiri, wdg. A machibidokwara m ma ọ bụ gbochie m n'ọtụtụ ebe mgbasa ozi ọha na eze maka naanị mkparịta ụka sayensị na data. Ihe jọgburu onwe ya karị, anatala m ọtụtụ akwụkwọ ozi sitere n'aka ndị dọkịta, ndị nọọsụ, ndị ọkwọ ụgbọ elu, ndị agha na ndị ọkachamara ndị ọzọ, bụ ndị a chụrụ n'ọrụ ma ọ bụ chụrụ n'ọrụ n'ihi otu ihe ahụ - ndị nwere ezinụlọ, nnyefe, ọrụ na nrọ…. nke ọchịchị aka ike zuru ụwa ọnụ ọhụrụ na-aga n'ihu n'aha "ahụike." Ọ dịghị mgbe ịda ogbenye nke ịbụ hapụrụ a na-enwe mmetụta nke ukwuu gburugburu ụwa dịka ndị bishọp anyị anọgidewo na-agbachi nkịtị kpamkpam ma ọ bụrụ na ọ bụghị mgbagwoju anya - na-ahapụ ìgwè atụrụ ha nye anụ ọhịa wolf.Olu Ezigbo Ndị Ọzụzụ Atụrụ… Olee Ebe You Nọ?, Akwụkwọ ozi mepere emepe nye ndị bishọp Katọlik
Ị kpọghachiteghị ndị kpafuru akpafu ma ọ bụ chọọ ndị furu efu, kama jiri obi ike na obi ọjọọ chịa ha. Ha we b͕asasia n'ihi enweghi onye-ọzùzù-aturu, we ghọ ihe-oriri nye anu-ọhia nile. (Ezikiel 34:2-5)
Ugbu a, anyị na-ahụ nri na-amalite na-apụ n'anya nke shelves n'ọtụtụ ebefoxnews.com, nbcnews.com dị ka mba ndị ọzọ nwayo na-ekwupụta echiche nke machibido onwe ụgbọ ala nwe.awara awara.co.uk Emebere ya nke ọma dịka akụkụ nke Nnukwu Mbido, nke na-abụghị ihe ọzọ ma e wezụga ụma na-akwatu ọnọdụ ihe dị ugbu a iji “wuliteghachi nke ọma.”Olu Ihe nkwado maka mmetụta Ọ bụghị ịkpọlite ​​ndị ogbenye n'ebe ugwu kama itinye mmadụ niile na ịda ogbenye. Ọ bụ mmezu nke Amụma Aịsaịa banyere Kọmunist zuru ụwa ọnụ na okwu nile nke Nna Nzukọ-nsọ ​​Lactantius:
Nke ahụ ga-abụ oge a ga-achụpụ ezi omume, kpọọkwa onye na-emeghị ihe ọjọọ asị; nke ndi n wickedmebi iwu nāchọsi ezi ihe ike dika ndi-iro; ọbụghị iwu, ma-ọbụ usoro, ma-ọbụ ọzụzụ ndị-agha a ga-echekwa… a ga-eme ihe nile ihere ma jikọta ọnụ imegide ezi, na megide iwu nke okike. N'ihi nka ag theme ka uwa tọb wasteọrọ n'efu, dika agāsi na ha zuru otù ihe n'ike. Mgbe ihe ndia geme, mgbe ahu ndi eziomume na ndi neso uzo ezi okwu g’agbapu iche n’ebe ndi ojo no, ma gbaba n’ime solitude. -Lactantius, Nna Chọọchị, Uche Chukwu, Akwụkwọ VII, Ch. 17
N'ime ọzara.Olu Mgbaba nke Oge Anyị
…Enyere nwanyị ahụ nku abụọ nke ugo ukwu ahụ, ka o wee fega n’ebe ọ nọ n’ime ọzara, ebe, n’ebe dị anya site na agwọ ahụ, a na-elekọta ya otu afọ, afọ abụọ, na ọkara afọ. (Mkpughe 12:14)
Ihe ndị a niile bụ ikwu na Onye-nwe na-ekwe ka Nzukọ-nsọ ​​Ya bata n’ọchịchọ nke ya. Dịka e bupụrụ Jizọs uwe na ugwu ya, otu ahụ kwa, ebube nke Nzukọ-nsọ ​​ka a na-atụba n’ájá, ya na ikpere arụsị ya, iji sachapụ na sachapụ mkpụrụ obi ya. Fr. Ottavio Michelini bụ onye ụkọchukwu, onye omimi, na onye otu Ụlọikpe Papal nke Pope St. Paul VI (otu n'ime nsọpụrụ kachasị elu nke Pope na-enye onye dị ndụ). Na June 15, 1978, St. Dominic Savio sịrị ya:
Na Nzukọ-nsọ, e debere n’ụwa dịka onye nkuzi na nduzi nke mba dị iche iche? Oh, Ụka! Nzukọ-nsọ ​​nke Jisus, nke weputara site n'ọnya nke akụkụ Ya: ya onwe-ya kwa emebiwo ma bute ya site nsi nke Setan na nke ajọ usu-ndi-agha-ya - ma ọ gaghi-ala n'iyì; n’ime Nzukọ-nsọ ​​dị ugbu a Onye-mgbapụta dị nsọ; ọ nweghị ike ịla n'iyi, mana ọ ga-enwerịrị oke agụụ ya, dịka isi ya anaghị ahụ anya. Mgbe nke ahụ gasịrị, a ga-akpọlite ​​Nzukọ-nsọ ​​na mmadụ nile site na mkpọmkpọ ebe ya, ibido ụzọ ọhụrụ nke ikpe ziri ezi na nke udo nke Alaeze Chineke ga-ebi n’ezie n’ime obi nile—alaeze ime ahụ nke mkpụrụ obi ziri ezi rịọrọ ma rịọ ya arịrịọ. ruo ọtụtụ afọ [site n'aririọ nke Nna-ayi: “Ala-eze-Gi bia, Ka eme uche-Gi n'elu uwa dika esi eme ya n'elu-igwe”). — cf. “Fr. Ottavio - Oge Ọhụrụ nke Udo
Ịda ogbenye nke oge dị ugbu a
Nwa m nwanyị Denise, onye ode akwukwo, kpọọ m ekwentị taa. Ọ nọwo na-atụgharị uche banyere “ọganihu” mmadụ na otú ihe owuwu nke oge gara aga si dị nnọọ elu karịa taa, ọ bụghị nanị n'ịdị mma kama ịma mma. Anyị malitere ikwurịta otú n'ezie ọtụtụ n'ime ọgbọ a na-ada ogbenye nke ukwuu ma e jiri ya tụnyere oge gara aga na otú echiche na anyị nwere "ọganihu" bụ ụgha. Tụlee otú egwu siworo tụfuo ịma mma na ebube nke oge gara aga, nke na-emekarị ka ọ bụrụ banal na nke anụ ahụ. Otu nri anyị na-eri sirila n'ubi ndị na-eri nri na-edozi ahụ na-akụ n'ụlọ ruo n'ọtụtụ nri edozigharịrị site na mkpụrụ ndụ ihe nketa nke nwere kemịkalụ, ihe nchekwa, na kemịkalụ ugbo, dị ka glyphosate.Olu Nnukwu Nsogbu Lee ka ọnọdụ udo nke ụwa n'agbanyeghị ngwa agha nke mbibi na-aga n'ihu si bụrụ nke na-esighi ike karịa mgbe ọ bụla. Kedu ka obodo na obodo niile ka na-enweghi mmiri dị ọhụrụ na nri bụ isi ebe ndị ọdịda anyanwụ na-azụta mmiri karama wee buru oke ibu. Kedu ka nka nzikọrịta ozi n'etiti ndị mmadụ sirila nwetaghachi site na teknụzụ. Kedu ka ahụike ọha na eze si na-agbada ka ọrịa mgbochi ọrịa na-amalite na-arị elu. Ka ezinụlọ ezinụlọ si na-aka ngwa ngwa ma na-agbasa okwu ndọrọ ndọrọ ọchịchị. Kedu ka nnwere onwe na ọchịchị onye kwuo uche ya si na-ada, ọ bụghị ọganihu.
Ọganihu ọ bụ n'ezie usoro na-arị elu karịa mgbe niile? Ọ bụ na nkwakọ ngwaahịa (ma ọ bụ ime ihe egwuregwu ma ọ bụ ịkwa iko ma ọ bụ ime mmanya ma ọ bụ mmiri ara ehi ma ọ bụ cheese ma ọ bụ ciment, maka nke ahụ) ọ ka mma karịa narị atọ ma ọ bụ narị asaa ma ọ bụ narị afọ iri na itoolu gara aga? - Anthony Doerr, Oge anọ na Rome, ibe. 107
Enwere m ike ịnụ ka Jizọs na-ekwu maka Nzukọ-nsọ ​​na ụwa:
N'ihi na i nāsi, Abum ọgaranya, emewom nke-ọma, ọ dighi kwa ihe nāchọm; ebe ị maghị na ị bụ onye obi ebere, onye nwere obi ebere, ogbenye, kpuru ìsì na onye gba ọtọ. N'ihi nka asim gi ka i zutaram ọla-edo asuchaworo n'ọku, ka i we ba ọgaranya, na uwe ọcha iji yikwasi gi, na idebe ihere ọtọ-gi ka aghara ihu ya, na izọputa ite-gi manu, ka i we hu. Ndi m'huru n'anya ka m'nābara nba, nādọ kwa ha aka na nti; ya mere nwee ume ma chegharịa. (Mkpu. 3:17-19)
Ụbịam kacha mkpa ịmara n'oge a bụ nke ndụ ime anyị. N’ihi na ọ bụrụ na Chineke ekwewo ka mmadụ weta onwe ya ruo n’ókè nke ibibi onwe ya, ọ bụ nanị ka anyị wee mata mkpa ya kpam kpam na nke na-apụghị ịgbanwe agbanwe. Ọ bụ ịda ogbenye nke ịghọta na enweghị m ike imegide oke mmiri nke Kọmunist ọhụrụ a. Ọ bụ ịda ogbenye na-efunahụ m nnwere onwe. Ọ bụ ịda ogbenye nke inwe mmetụta adịghị ike nke onwe m, enweghị ike ịgbanwe ọnọdụ ndị gbara m gburugburu. Ọ bụ ịda ogbenye nke ịhụ onwe m ka m bụ n'ezie. Ọ bụ ịda ogbenye nke ịnakwere nke a ma ọ bụ ọrịa ahụ ma ọ bụ ọrịa ahụ. Ọ bụ ịda ogbenye nke na-eto eto ma na-eche ọnwụ m ihu, nke ịhụ ka ụmụ m na-ahapụ ụlọ n'ime ụwa nke na-emegidewanye okwukwe na nnwere onwe. Ọ bụkwa ịda ogbenye nke ịhụ n'ime onwe m mmejọ na adịghị ike ndị ahụ na-aga n'ihu na-eme ka m sụọ ngọngọ wee daa.
Otú ọ dị, ọ bụ n'ebe ahụ, Ebe ahụ n'oge dị ugbu a eziokwu ka m wee malite ịtọhapụ m. Ọ bụ n’oge dị ugbu a ka m na-ahụta uche Chineke zoro ezo, na nhụsianya ya niile, na-adọrọ m mma ka O wee gwa obi m okwu wee gwọọ ya. Ọ bụ ebe a, na ịda ogbenye nke ọzara nke enweghị enyemaka ka m nwere ike ịmalite n'ezie ime ka Chineke burum nna ka m'rapuru Onwem nye Ya nāsi, Onye-nwe-ayi Jisus Kraist, Ọkpara Devid, merem ebere.Luke 18: 38
Anyị chọrọ anya nke nwere nghọta nke obi iji dupuo ihe nwogha, ịsị “ee, ị bụ Nna m” n'ime ụwa. now. E nwere nanị otu ihe, dị ka a pụrụ isi kwuo ya, ebe Chineke bụ maka anyị, na nke ahụ bụ now. Kedu ka anyị ga-esi gbanarị ngwa ngwa site ugbu a - banye n'ihe anyị chere kwesịrị ịdị, gaa n'ihe nwere ike ịdị, gaa n'ihe dịbuworo, na ihe na-abịa. Olee otú ike na nlebara anya anyị na-atụfu nchegbu n'oge gara aga, na-echegbu onwe na obi abụọ na juputara na egwu maka ọdịnihu. Ọ nọnyeere m ugbu a, jiri nwayọ, na-arịọ m ka m nabata Ya, ka m mata Ya. ugbu a, n'otu oge a gbara okirikiri, enwere m ike ịsị "ee, Nna." Obere ogbenye dị otú ahụ "ee"; ọnweghị nnukwu ihe doro anya na agaghị m eme nke a ọzọ, emelakwa mmejọ ahụ ọzọ - enweghị ụjọ na obi nkoropụ na enweghị m ike ikwesị ntụkwasị obi. Naanị ntakịrị "ee" ugbu a… Nke ahụ bụ ibi ndụ na ịda ogbenye m na-adabere naanị na Ya ịhụ m, iji mee ka m nwee ike ịsị "ee" - ime ihe m na-enweghị ike - kwesịrị ntụkwasị obi ruo ọnwụ. — Sr. Ruth Burrows, OCD, onye nọn Kamel, bipụtara na Ebube, Jenụwarị 2022, Jenụwarị 10
Ihe na-agbagwoju anya bụ na ọ bụghị mgbe uche m ga-emeri, kama nke Ya, ka m na-achọta udo nke na-agụsi m agụụ ike.Olu Ezi Ụbọchị Izu Ike Jizọs gwara Ohu Chineke Luisa Piccarreta:
Nwa m nwanyị, a na m eche na ọ dị m mkpa ka ihe ahụ e kere eke zuru ike n’ime m, mụ onwe m kwa n’ime ya. Ma ị maara mgbe ihe e kere eke na-ezu ike n'ime m, na m na ya? Mgbe ọgụgụ isi ya na-eche banyere m ma ghọta m, ọ na-adabere na ọgụgụ isi nke Onye Okike ya, na nke Onye Okike na-enweta ezumike n'uche okike. Mgbe mmadụ ga-ejikọta ya na Uche Chineke, ọchịchọ abụọ ahụ makụọ ma zuru ike ọnụ. Ọ bụrụ na ịhụnanya mmadụ na-ebili karịa ihe niile e kere eke ma hụ naanị Chineke ya n'anya - lee ihe ezumike mara mma ka Chineke na ihe e kere eke na-enweta n'otu n'otu! Onye na-enye izu ike, chọta ya. M ga-abụ ihe ndina ya ma debe ya n'ụra kacha atọ ụtọ, kechie ya na ogwe aka m. Ya mere, bia zuru ike n'obim. -Mpịakọta 14, Machị 18th, 1922
Ọ bụrụ na anyị nwere ike ịnakwere naanị na ihe niile bụ ndị aka nke Chineke kwere, ọbụnadị ajọ omume kacha njọ, mgbe ahụ anyị ga-ezu ike n'ịmara na Ya. ikike ikwe nwere ụzọ dị mma karịa nke m na-ahụ anya. Nhapụ a n’ebe Chineke nọ bụ ezigbo isi iyi nke udo n’ihi na ọ dịghị ihe ga-emetụ mkpụrụ obi m aka mgbe m na-ezu ike n’ime Ya.
Ị naghị atụgharị n'ebe m nọ, kama, ị chọrọ ka m gbanwee echiche gị. Ị bụghị ndị ọrịa na-arịọ dọkịta ka ọ gwọọ gị, kama ọ bụ ndị na-arịa ọrịa na-agwa dọkịta otu esi eme ya. Ya mere, emela omume otú a, kama kpee ekpere dị ka m kụziiri gị n'ime Nna anyị: "Ka e doo aha gị nsọ," ya bụ, ka otuto na mkpa m. “Alaeze gị bịa,” ya bụ, ka ihe niile dị n’ime anyị na n’ụwa dị ka alaeze gị si dị. “Ka e mee uche gị n’ụwa dị ka ọ dị n’Eluigwe,” ya bụ, n’ime mkpa anyị, kpebie ka i si kwesị ekwesị maka ndụ anụ ahụ na ebighị ebi anyị. Ọ bụrụ na ị sị m n'ezie: "Ka e mee uche gị", nke bụ otu ihe ahụ dị ka ịsị: "Ị na-elekọta ya", m ga-etinye aka na ike m nile, na m ga-edozi ọnọdụ ndị kasị sie ike. —Jizọs Nye Ohu Chineke Fr. Dolindo Ruotolo (d. 1970); site na Novena nke Ahapụ
Ọ bụ ịbanye n'ime ịda ogbenye nke oge a, ebe Chineke nọ, ma mee ka ọ hụ gị n'anya ma na-elekọta gị n'ụzọ dị ukwuu Dọkịta siri hụ na ọ dị mma - e chifịa, ịda ogbenye, gba ọtọ - ma hụ ya n'anya.
Nwa nke madu, legide gi anya. Mgbe ị hụrụ na emechigharịwo ya, mgbe ị hụrụ ihe niile ewezugara n’efu, na mgbe ị dịla njikere ibi na-enweghị ihe ndị a, mgbe ahụ ị ga-amata ihe m na-akwado. — amụma e nyere Fr. Michael Scanlan na 1976. countdowntothekingdom.com
N'ihi na ụbọchị agbamakwụkwọ nke Nwa Atụrụ ahụ eruola, nwunye ya akwadebewo onwe ya. A hapụrụ ya iyi uwe linin na-enwu gbaa. (Mkpu 19: 7-8)
Sakramenti nke oge a
Ọrụ nke Oge ahụ
Olu Ezigbo Ndị Ọzụzụ Atụrụ… Olee Ebe You Nọ?, Akwụkwọ ozi mepere emepe nye ndị bishọp Katọlik
Olu Ihe nkwado maka mmetụta
Olu Mgbaba nke Oge Anyị
Olu Nnukwu Nsogbu
Olu Ezi Ụbọchị Izu Ike
Ihe na ỤLỌ, NWA na tagged tụkwasị obi, nna, ọcha, ịda ogbenye, ịdị umeala n'obi, nwa, ịgbanyekwa, ugbu a.
← Azịza nye Jimmy Akin - Nkebi nke 2
Novena nke Ahapụ →
Archives Họrọ net Ike 2022 (2) Eprel 2022 (2) Machị 2022 (5) Febụwarị 2022 (5) Jenụwarị 2022 (7) Disemba 2021 (7) Nọvemba 2021 (7) Ọktọba 2021 (6) Septemba 2021 (5) Ọgọstụ 2021 (5) Julaị 2021 (3) June 2021 (2) Ike 2021 (6) Eprel 2021 (6) Machị 2021 (9) Febụwarị 2021 (10) Jenụwarị 2021 (9) Disemba 2020 (9) Nọvemba 2020 (8) Ọktọba 2020 (15) Septemba 2020 (6) Ọgọstụ 2020 (6) Julaị 2020 (10) June 2020 (13) Ike 2020 (9) Eprel 2020 (11) Machị 2020 (12) Febụwarị 2020 (7) Jenụwarị 2020 (10) Disemba 2019 (7) Nọvemba 2019 (11) Ọktọba 2019 (7) Septemba 2019 (6) Ọgọstụ 2019 (1) Julaị 2019 (4) June 2019 (6) Ike 2019 (9) Eprel 2019 (15) Machị 2019 (5) Febụwarị 2019 (9) Jenụwarị 2019 (7) Disemba 2018 (3) Nọvemba 2018 (10) Ọktọba 2018 (8) Septemba 2018 (5) Ọgọstụ 2018 (4) Julaị 2018 (2) June 2018 (6) Ike 2018 (13) Eprel 2018 (10) Machị 2018 (8) Febụwarị 2018 (13) Jenụwarị 2018 (11) Disemba 2017 (10) Nọvemba 2017 (10) Ọktọba 2017 (11) Septemba 2017 (9) Ọgọstụ 2017 (11) Julaị 2017 (9) June 2017 (9) Ike 2017 (10) Eprel 2017 (8) Machị 2017 (9) Febụwarị 2017 (8) Jenụwarị 2017 (9) Disemba 2016 (14) Nọvemba 2016 (13) Ọktọba 2016 (6) Septemba 2016 (15) Ọgọstụ 2016 (7) Julaị 2016 (6) June 2016 (8) Ike 2016 (10) Eprel 2016 (7) Machị 2016 (25) Febụwarị 2016 (21) Jenụwarị 2016 (8) Disemba 2015 (7) Nọvemba 2015 (9) Ọktọba 2015 (11) Septemba 2015 (9) Ọgọstụ 2015 (5) Julaị 2015 (8) June 2015 (8) Ike 2015 (9) Eprel 2015 (9) Machị 2015 (27) Febụwarị 2015 (17) Jenụwarị 2015 (11) Disemba 2014 (10) Nọvemba 2014 (7) Ọktọba 2014 (21) Septemba 2014 (21) Ọgọstụ 2014 (6) Julaị 2014 (6) June 2014 (5) Ike 2014 (19) Eprel 2014 (22) Machị 2014 (26) Febụwarị 2014 (24) Jenụwarị 2014 (27) Disemba 2013 (24) Nọvemba 2013 (6) Ọktọba 2013 (5) Septemba 2013 (3) Ọgọstụ 2013 (2) Julaị 2013 (4) June 2013 (1) Ike 2013 (6) Eprel 2013 (7) Machị 2013 (11) Febụwarị 2013 (10) Jenụwarị 2013 (3) Disemba 2012 (2) Nọvemba 2012 (3) Ọktọba 2012 (3) Septemba 2012 (5) Ọgọstụ 2012 (1) Julaị 2012 (3) June 2012 (5) Ike 2012 (2) Eprel 2012 (5) Machị 2012 (5) Febụwarị 2012 (7) Jenụwarị 2012 (6) Disemba 2011 (8) Nọvemba 2011 (6) Ọktọba 2011 (7) Septemba 2011 (3) Ọgọstụ 2011 (5) Julaị 2011 (4) June 2011 (9) Ike 2011 (4) Eprel 2011 (1) Machị 2011 (4) Febụwarị 2011 (3) Jenụwarị 2011 (7) Disemba 2010 (7) Nọvemba 2010 (5) Ọktọba 2010 (5) Septemba 2010 (5) Ọgọstụ 2010 (3) Julaị 2010 (5) June 2010 (7) Ike 2010 (9) Eprel 2010 (14) Machị 2010 (8) Febụwarị 2010 (9) Jenụwarị 2010 (5) Disemba 2009 (8) Nọvemba 2009 (6) Ọktọba 2009 (5) Septemba 2009 (4) Ọgọstụ 2009 (4) Julaị 2009 (7) June 2009 (7) Ike 2009 (5) Eprel 2009 (8) Machị 2009 (2) Febụwarị 2009 (8) Jenụwarị 2009 (13) Disemba 2008 (10) Nọvemba 2008 (9) Ọktọba 2008 (11) Septemba 2008 (10) Ọgọstụ 2008 (7) Julaị 2008 (2) June 2008 (5) Ike 2008 (7) Eprel 2008 (8) Machị 2008 (10) Febụwarị 2008 (7) Jenụwarị 2008 (5) Disemba 2007 (12) Nọvemba 2007 (9) Ọktọba 2007 (5) Septemba 2007 (10) Ọgọstụ 2007 (8) Julaị 2007 (5) June 2007 (5) Ike 2007 (6) Eprel 2007 (7) Machị 2007 (4) Febụwarị 2007 (6) Jenụwarị 2007 (10) Disemba 2006 (9) Nọvemba 2006 (10) Ọktọba 2006 (10) Septemba 2006 (24) Ọgọstụ 2006 (19) Julaị 2006 (16) June 2006 (21) Ike 2006 (17) Eprel 2006 (19) Machị 2006 (22) Febụwarị 2006 (16) Jenụwarị 2006 (16) Disemba 2005 (10) Nọvemba 2005 (1) June 2005 (1) Eprel 2003 (1) Machị 2003 (1)